(Dhagayso+Daawo Sawiro) Puntland oo dhagax-dhigtay dhisme cusub (Terminal) garoonka diyaaradaha ee Garowe. – Radio Daljir
(Dhagayso+Daawo Sawiro) Puntland oo dhagax-dhigtay dhisme cusub (Terminal) garoonka diyaaradaha ee Garowe.
Oktoobar 29, 2012 12:21 g 0
Garowe, Oct, 29 – W/kuxiggeenka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntlnad C/qani Geelle Maxamed ayaa maantay dhagax-dhigay dhismayaal laga-hirgalinayo garoonka diyaaradaha ee Garowe Internation Airport.
Dhismayaashaan ayaa ka kooban dhawr qaybood, waxaana ugu wayn aqalka laga-hago dhammaan diyaaradaha duulimaadka, iyo dhismayaal-kale oo isugu jira kuwa loogu-talagalay VIP-da, iyo goobo-lagu nasto.
Wasiir C/qani Geelle Maxamed oo warbaahinta kula-hadlay goobta dhagax-dhiga ayaa dhismayaashaan ku tilmaamay bilaw-fiican, waxaana uu hadalkiisa raaciyay inaysan jirin cid ka caawisay dawladda Puntland hirgalinta dhismayaashaan.
Wasiirka ayaa fariin-baaq ah waxaa uu u diray dhammaan qurba-joogta reer Puntland meel-kasta oo ay joogaan, waxaana uu ku booriyay inay maal-gashi ku samaystaan dalkooda, ayna ka qayb-qaataan tillaabooyinka lagu hormarinayo deegannada Puntland.
Dhinaca kale, ?Enginer C/qaadir Ciise Xaaji Maxamed oo ah Injineerka dhisaya dhismahaan cusub ayaa sheegay in muddo 6-bilood ah ay rajaynayaan hawshaan inay ku qabtaan, waxaana uu xusay horay inay u sameeyeen laamiga dheer ee diyaaraduhu kusoo dagaan, kana-duulaan ee loo yaqaan (Run-way).
Dhismayaashaan cusub ee laga-hirgalinayo garoonka Garowe Internetional Airport ayaa kusoo beegmaysa xilli garoonka Garowe uu yahay mid u baahan-dayactir ballaan, oo dhanka dhismayaasha ah.
Maxmaed C/llaahi Cali ‘Kooshin’